Spécialiste moteur injection essence peugeot 306
Date: 13 septembre 2017 - 12:42
Ny olana dia mi-consomme lasantsy be ilay fiara (13L/100 sur route).
Araka io sujet io, dia efa betsaka ny garage nohatoniko fa samy manana ny filazany avy ary tsy dia nahafa-po ny prestation-ndry zareo.
Re: Spécialiste moteur injection essence peugeot 306
Date: 13 septembre 2017 - 13:05
Misy garage izay eo Tsimbazaza eo mahay réglage tsara, ny ahy ny fiara starex fa tena mitsitsy be mihitsy fa izy lasa maditr'alina fotsiny
Date: 14 septembre 2017 - 12:53
Njoun// miaotra nandray anjara fa iza ny anaran'ilay garage?
Misaotra mialoha ho an'ireo hafa mbola hamaly.
Date: 14 septembre 2017 - 13:05
Eo Tsimbazaza akain'ny BNI, ampitan'ny station d'essence io
Tsy misy hisaorana fa mahasoavà an!?
Date: 14 septembre 2017 - 13:45
lisany koa mafy loha efa tenenina foana fa Huyndai Jazz hoa no mpanjakan'ny fiara.
4L/100 kanefa tsy mety simba na 10taona aza fa manolo pneu fotsiny
Date: 20 septembre 2017 - 12:23
Date: 21 septembre 2017 - 12:21
Otran'ilay ntenenko tatsy amin'ilay sujet ray mikasika ny 306 tatsy ian, midira membre ao 306INSIDE MADA ao @ facebook dia ao apetraka ny olanao fa tsy maintsy misy manana solution ho anao ao, sady betsaka ny mpampiasa 306 mpikambana ao.
Date: 22 septembre 2017 - 08:47
Jereo OPTIMUM MADA CAR ao @FB de ho afa-po enao, eny alasora ambodivondava ny garageny
Date: 22 septembre 2017 - 16:37
C4r// misaotra betsaka @ torohevitra
Mirary soa de mazotoa ihany koa
Date: 28 septembre 2017 - 12:03